somali poems | Favorite Links | Culture | Family Photo Album | My contacts
Gabayada hal-xidhaalaha ah ee caan ka ah aadna loo yaqaano waxaa ka mid ah tixdii wada qafilayd ee uu tiriyey geeraarshihii la odhan jiray Faarax Caytame. Faarax wuxuu tixdaa oo la furi waayey kusoo gabagabeeyay Silsiladii Halac Dheere ee mudada socotay. Raggii barigaa calanka maansada xambaarsanaana ay badi uga qayb galeen. Wuxuu Faarax wax ku hal-xidhaalaynayaa aqoonta xidigiska, xisaabta, juquraafiga, iyo axkaanta diinta dirkaba. Wuxuuna hal-xidhaalaynayey rag ay ka mid ahaayeen Cali Sharmaarke, Cali Dhuux, iyo Gooni. Tixdaa wuxuu Faarax tiriyey kun iyo sagaal boqol iyo dhowr iyo tobankii, ha yeeshee raggii loo jeediyey way furi waayeen, ilaa maantana cid aan og nahay oo furtay ma jirto. (Idaajaa.) Wuxuu yidhi Sheekh Faarax:
1- Maansada rag badan baa yaqaan, maritinkeediiye
2- Maqtalkaa la kala joojiyaa, mid iyo caynkeede
3- Adiga oon u meel dayin inaad, madal ka soo heesto
4- Muran uun inaad keen tidhaa, mahabbanayn saase
5- Allay lehe Majeerteen sidaad tahay, ma moodayne
6- Waxaad aragga kaga miidh caddayd, maqalladaadiiye
7- Maxamuud Saleebaan markaad, qaylo dheer marisay
8- Maxaa kaa maqnaa ood qalbiga, uga madoobaatay?
9- Maxaa maanka kaa qaaday ood, meel la ladi wayday?
10-Ma madax baa lagaa laayay iyo, niman maqaawiir ah?
11-Ma magan baa lagaa qaaday iyo, mood aad ku ceebawday?
12-Ma Maal baa lagaa dhacay lag iyo, kun iyo miihaal ah?
13-Mise waxaad martida siisay baad, lacag ka miisaantay?
14- Miskiin gudub la wayn baad tihiin, waana loo marage
15- Ingiriisba "Mid-Way"1 ka samir, mulug wax saaraaye
16- Madhiyaana xeedhada maxaad, uga muraad yeelan?
17- Afartaa macneeyaye masalo, maandhaw iga hooya
18- Awalbuu malkada seegay ooy, marin habawsheene
19- Sayid Maxamed iyo Caamir muu, socotodood maago
20- Iyagaan mitimiyeen anfaco, amase maalkiiye
21- Bal maxuu Hartiga maanka fudud, uga masaafooday?
22- Afartaa Macneeyaye masalo, maandhaw iga hooya
23- Cirka mawjaddiisii haddaad, meelo ka xisaabto
24- Midkee curad ah meecaadda iyo, godanta moolkeeda?
25- Kobta qaalibkeedii ka maro maalintii Axada
26. Xageebaa dawaarku u maraa falaga meeraaya
25- Meeshay Aljaws ka marmaan, ma aad taqaaniin dheh?
26- Ma ekayne saacaduhu ways, kala maraayaane
27- Meelaha dharaartii badnaa, ma'a taqaaniin dheh?
28- Ayaanta iyo manaasiisha iyo magac siyaariinta
29- Midba siday mid ugu waafaqaan, ma'a taqaaniin dheh?
30- Mushtarkii mariikhii haduu, meelo ka khilaafo
31- Macnahay tarbiica u noqdeen, ma'a taqaaniin dheh?
32- Cisho qudha dayaxu waa maraa, naaf madoobaha e
33- Suxalkuna marxaladooyin buu, bilo dhex maaxaaye
34- Orodkoodu waana isku mide, ma aad taqaaniin dheh?
35- Maalin iyo habeen saacaduhu, wayna marayaane
36- Meeshay dharaartii badnaan, ma aad taqaaniin dheh?
37- Biyaan wayso kuu maydhihayn, darabsi Mooyaane
38- Manfacadana kuu karinaya oo, lagama maarmaan ah
39- Gabagabo markaa kaa ansixin, ma aad taqaaniin dheh?
40- Nin Muslim ah asaan naagihii meher u haynaynin
41- Bal waxa mashaqadaa lahaa ma'a taqaaniin dheh?
42- Nin Maroodi raadsaday hadduu gabas mariideeyo
43- Mudutuusha waxuu fiiriyoo, malamaleeyaaba
44- Muuqiisa goortuu arkoo, gadabka soo mooday
45- Wax marxal ah meel fog iska taag, orodna maanshawye
46- Waran caaraddii lama maro, iyo miciyihii Aare
47- Abidkay nimaan moogtannaa, ima majiiraynne
48- Haddaydaan masaladaa furayn, maansadaan tiriyay
49- I maqlaay fagaaraha, muxuu uga uga madiixaayey?
1) Mid Way wuxuu ahaa markab Ingiriisku lahaa oo xilliyadaa la gubay.
Haddii aad rabto Maax Cabdi Dhabase na ugeeyoo gabayga inta ka maqan bal soo raadi.
Maxamed Rashiid Sheekh Cabdullaahi ayaan ka saxnay.
Taariikh Kooban oo ku saabsan Sayid Maxamed Cabdille Xasan, Allaha u naxariistee,
iyo halgankii hubaysnaa ee uu kaga soo horjeeday gumaystayaasha Ingiriiska, Xabashida,
Gudcur dam ah habeen dumay dhulkoon dacal ka nuuraynin
Ma danyado talaabada haddaan dowga marayaaye
Dabaylihiyo fooraa la tagi daar waxaan galine
Waxaa laga yaabaa dad badani markii ay maqlaan magaca iyo martabada uu Sayid Maxamed Cabdille Xasan ku lee yahay taariikhda Soomaaliyeed, baalka dahabka ah ee lagu qoray taariikhdii Daraawiishta ee uu hogaanku u hayey Sayidku, iyo xushmada ay Sayidka u hayaan dhamaan Soomaalidu Bari iyo Galbeed, Koonfur iyo Waqooyi inay isweydiiyaan: "muxuu Sayid Maxamed ku mutaystay xusuuustaa karaamaysan ee aan cid kale la wadaagin?" Haddaba suuragal ma aha in qormo qudh ah lagu soo koobo dagaal 21 sanno soconayey, haseyeeshee waxaan isku dayeynaa in aan guudmaro dhiiranaantii, geesinimadii iyo mintidkii gobonimodoonka Daraawiishta uu hogaaminayey Sayid Maxamed Cabdille Xasan kuwaa oo hadh iyo hoyba u diiday gumaysiga dhinac walbana ka wareemay.
Markii Sayid Maxamed Cabdille Xasan uu kusoo noqday Berbera isagoo xajkii ka yimid sanadku markuu ahaa 1895kii wuxuu tagay miyiga Berbera wuxuuna faafin jiray diinta Islaamka isagoo umadda uga digi jiray inay is dhacaan iskuna duulaan. Wuxuuna heshiis ka dhex beeri jiray beelaha wada degan haddii ay isqoonsadaan. Sidaa awgeed, Ingiriisku wuxuu Sayidka u arkayey ugu horraynba inuu ahaa nin laga dambeeyo oo awood u leh inuu xasiloonaan ka dhex dhaliyo qabaa'ilka Soomaaliyeed. Kuxigeenkii qunsulkii Ingiriiska Berbera u fadhiyey waxa uu xidhiidh joogta ah la lahaa Sayid Maxamed, haddii qas dhaco oo miyiga ka dhacana waa lala socodsiin jiray waxaana laga codsan jiray inuu wax ka qabto.
April 12, 1899kii qunsulkii sarre ee Ingiriiska Gaashaanle Sare J. Hayes Dawson* waxaa soo gaadhay warar sheegaya in Sayid Maxamed madax ka yahay ciidamo hubaysan oo tiradoodu gaadhayso 3000 uuna tabaabusho ugu jiro duulimaad ba'an oo uu Ingiriiska kusoo qaado. Bishii August 1899kii waxay ilaaladii Ingiriisku soo sheegtay in Sayid Maxamed yimid Burco isaga oo wata ciidamo 5000 ah oo 1500 oo kamid ahi ay fardooleey yihiin, 300 oo ka mid ahina ay banaadiikh haystaan. Burco waxay ahayd meel xagga tabcooyinka dagaalka aad ugu haboon waayo biyo joogta ah bay lahayd xilliyada abaaraha ah. Sayid Maxamed Cabdille Xasan waqtigaa wuxuu si badheedh ah ugu dhawaaqay inuu dagaal muqadas ah oo gobonimo doon ah Ingiriiska kula jirro asgartiisiina wuxuu u baxshay Daraawiish, wuxuu u faray qabaa'ilka Soomaliyeed oo dhan inay la dagaalamaan, jihaadka liddiga gaaladana ay la galaan.
Dirhamkuu idiin qubahayaad dir u go'aysaane
Sidaa daraadeed, magaalada Berbera waxaa soo xaluushay akhbaar cabsi leh oo sheegaysa in ciidamada Daraawiishtu ay kusoo dhow yihiin Berbera markii ay soo galaana ay baabi'in doonaan ayna dhici doonaan maalka iyo moodka shisheeyaha magaaladana gubi doonaan. Arintaasi argagax iyo cabsi ayey ku riday Ingiriiskii iyo gadisleydii Hindida ahayd kuwaas oo xoolihoodii oo dhan, badeecad iyo qalab waxay lahaayeen ku daldashay markab magaciisa la odhan jidhay FALCON waxayna u qaxeen magaalada Cadan ee dalka Yemen. Nimankii shisheeyaha ahaa ee Soomaliya ka tagay waxay usii qadimeen saraakiishii iyo ciidamadii Cadan laga soo qaadayey khatarta sugaysa marka ay Soomaaliya cagta dhigaan. Shisheeyihii ku hadhay Berberana habayn qudha ma ladin ilaa xeebta Berbera ay soo gaadheen laba markab oo kuwa dagaalka ah oo la kala odhan jidhay Medos iyo Bahome.
Waxaan idiin sheegayaa in aad samayseen wixii aad doonayseen, waxaa kale oo aan idiin sheegayaa in dadka idin rumaysan ay yihiin kuwa khaa'imiin ah oo diintoodii iyo dalkoodiiba caasiyey. Waa Maxamedkii aad taqaaneen oo idin warsanaya in aad hubka iska dhigtaan ood isdhiibtaan sidaa darteed baan warqadaan idiinku soo diray. Eega laba kala doorta: haddii aad dagaal doonaysaan gudooma baanu lee nahay, haddii aad nabad rabtaana baxsha qiimaheeda oo ah in aad dalka isaga tagtaan.
Qunsulkii sarre ee Ingiriisku markii uu akhristay warqadii Sayidka aad buu uga cadhooday waxaana Ingiriisku u aqoonsaday Sayidka inuu yahay nin ku shuftoobay taliskiisa, wuxuuna digniin ku bixiyey Soomaalidii taliskiisa ku hoos jirtay in ciqaab ay la kulmi doonaan haddii habayaraatee wax xidhiidh ah ay la yeeshaan ama kaalmo u fidiyaan Sayidka. Ingiriisku waxay Sayidka u baxsheen 'Mad Mullah' oo macnaheedu yahay wadaadkii walaa, waayo xilligaa gumaysigu wax aan miyir qabin oo biimo ah ayuu u haystay ciddii xooga Ingiriisku lee yahay isku dayda in ay is hortaagto. Taaktikada iyo tabcooyinka dagaalka ciidamadii Daraawiishta oo xambaarsan waanadii xusuusanna gabayadii guubaabada lahaa ee Sayidka naftooda bay u hureen dalkooda iyo diintooda siddii ay u daafici lahaayeen.
Ninkii bala'da lagu yeedhiyee bayraq lagu duubay
Inaan boqorka loo deynahayn ba'aha yow sheega
Inaan dhegaha loo balalinayn ba'aha yow sheega
Ujeedada duulimaadkiinu waa inaad dishaan Sayidka ciidamadiisana jabisaan, haddii uu Sayidku isdhiibo waad aqbali kartaan, haddii uusan arintaa wax shuruud ah ku xidhin. Markaa ka dibna waa inaad baabi'isaan dhamaanba qabaa'iladii Sayidka taageerada u fidiyey.
Gaashaanle Sarre Swayne waxaa loo xilsaaray inuu dhiso ciidamadii Sayidka laga horgayn lahaa wuxuuna adkeeyay heshiiskii uu Ingiriisku la lahaa Xabashida, waxayna go'aan ku gaadheen in ciidamo huwan ah ay Daraawiish ku kacaan sidaa daraadeed wuxuu Ingiriisku dalka Itoobiya u diray Gaashaanle (..........................) oo ka tirsanaa ciidamadii la odhan jidhay Royal Guards, ninkaasi oo soo gaadhay Herer April 1901 si uu u soo qabanqaabiyo una tababaro ciidamo dhinaca galbeed ka weerara Sayidka.
Waxaan aad ula amakaagay sidda ay naftooda u biimaynayaan Daraawiishtu. Marnaba u malayn maynin ilaa aan dagaal kula kulmay in khatarta Daraawiishtu heerkaa gaadhsiisan tahay. Daraawiishtu waxay u badan yihiin niman xaasaskoodii, ciddoodii, iyo maalkoodii kasoo tagay si ay u noqdaan naftood hurayaal. Waxay sitaan cimaamado iyo go'yaal bayl ah, waxayna qabaan amar ah inay dilaan Ingiriiska iyo askartiisa qiima kasta ha ugu kacdee, iyagoo rumaysan haddii la dilo iyo haddii ay wax dilaanba inay janada galayaan. Sidaa darteed, goobtii dagaalkii raggii Daraawiishta uga dhintay waxay u badnaayeen xaajiyaal iyo shuyuukh noogu soo galay dhufayskii aanu ku jirnay iyagoo leh, Allahu Akbar ama Ilaah baa weyn.
Sidii boodhle geesala' ninkii gaaddaduu mariyey
Ingiriiska intii ay socdeen labadii duulimaad ee horre waxaa u korodhay waayo-aragnimo dheeraad ah waxayna ogaadeen xoogga Daraawiishta oo ah mid aan dhayal loo loodin karin. Ciidamadii Ingiriiska ooy kamid ahaayeen kuwii la odhan jidhay King's African Rifles waxaa kusoo kordhay kalsooni darro iyo baqdin ay ka qaadeen Daraawiishta oo aan cadowga u turin. Si haddaba loo qabanqaabiyo loona kiciyo duulimaadkii saddexaad waxaa Soomaaliya yimid Oktober 23, 1903 dii General W. H. Manning, dawlada Ingiriiskuna waxay heshiis la yeelatay Talyaaniga oo ay isku waafaqeen in Talyaanigu geesta Bari kasoo weeraro Sayidka. Sidaa darteed laba markab oo ah kuwa dagaalka ooy Ingiriiska iyo Talyaanigu kala leeyihiin ayaa xeebaha dalka ku wareegaalaysanyey si ay u sahmiyaan meel ay asgartooda kasoo dajiyaan Sayidkana ka gaadaan.
September 16, 1903 dii waxa uu golaha wasiirada ee dowlada Talyaanigu u ogaaladay in Ingiriisku kasoo rogo ciidamo uu lee yahay magaalada Hobyo, sidaa daraadeed Ingiriisku wuxuu go'aan ku gaadhay inuu wado duulimaadkii saddexaad isagoo ciidamo xoogleh kasoo rogay Hobyo iyo Berbera si uu dhinac walba uga hareereeyo Sayidka. 1903 dagaalkii ka dhacay Gunburo Ingiriisku wuxuu u bixiyey Raqdii Gunburo sababtoo ah goobtaa waxaa ka raacday guuldaro culus.
July 3, 1903 dii waxaa dhamaaday duulimaadkii saddexaad oo intuu socday Sayidka iyo Ingiriisku Bari iyo Waqooyiba ku dagaalameen. Waxaa Ingiriiska gaadhay jug weyn waxaana saraakiishii uga dhintay dagaalka ka mid ahaa Gashaanle Sare A. M. Ruthford, Gaashaanle Dhexe A. W. D. Francis oo hogaaminayey ciidamadii la magac baxay Regiment Manchester, Dhame S. T. Albright oo taliye ka ahaa ciidamdii loo yiqiin ........... Regiment, Kabtan J. John Stewart oo ka tirsanaa ciidamadii loo yiqiin Argyll and Sutherland Highlanders, Dhame H. H. de B. Morris oo madax ka ahaa Est Kent Regiment, Dhame J.A. Gayonr, Dhame S. L. McKinnon oo madax ka ahaa North Derby Regiment ciidamo badanna xukumay. Guud ahaan, sida uu qoray Douglas Jaridine, waxay dagaalkan Daraawiishtu dhagta dhiiga u dartay sagaal (9) sargaal oo sarsare oo ciidamadii Ingiriiska hogaanka u hayey, in ka badan 187 askari, iyo in ka badan 29 askari oo dhaawac xuni soo gaadhay.
Duulimaadkii afraad wuxuu ahaa mid ay xoog uga qeyb galeen maraakiibta dagaalku, waxaana Ingiriisku go'aan ku gaadhay in Sayidka siddii dowlad xoog badan oo kale loola isticmaalo. General LAYNE ayaa loo xilsaaray fulinta duulimaadka afraad, waxaa kale oo la shaqaynayey Sareeye Guuto Egerton iyo Sareeye Guuto Fasken. Intii uu socday dagaalkaasi waxaa Ingiriiska Sayidku gaadhsiiyey khasaarooyin xoog badan waxaana cadowga ka dhintay saraakiil badan oo ay kamid ahaa Dhame J. R. Williams, Dhame G. Ester, iyo Laba Xidigle T. H. Aurder iyo kuwa kale oo badan. Goobihii laysaga horyimid intii duulimaadyadaasi socdeen oo Daraawiishta iyo Ingiriisku isku haleeleena waxaa ka mid ahaa Beerdiga, Cagaarweyne, Daratoole, Taargooye, iyo Jidbaale.
Adigaa jidkii lagugu wadi jimic la'aaneede
Afku gow' ku yidhi xaajadaad gees u badisaaye
Ingiriiska waxaa u muuqatay dagaal badheedh ah in aan waxba Sayidka lagaga qaadaynin haddii aan la badalin tabcada lagu socdo. November 1918kii gudi uu madax ka yahay General Hopkins oo loo xilsaaray inay darsaan xaallada Daraawiishta talooyin dagaaleedna ay Ingiriiska siiyaan ayaa yimid dalka Soomaaliya. October 1919kii baarlamaanka Ingiriisku wuxuu go'aan ku gaadhay inay Sayidka siddii dawlad xoog leh oo kale ula dagaalamaan, ayna duulimaadka ka qeyb galaan ciidmada dhulka, cirka iyo badduba.
Ingiriisku wuxuu ugu dambayntii go'aan ku gaadhay inuu Sayidka u diro ergo ka kooban maashaa'ikhdii Goboladda Waqooyi oo kala ahaa:
Sheekh Ismaaciil Sheekh Isxaaq madaxii dariiqada Saalixiyada, Skeekh Cabdullahi Sheekh Madar madaxii dariiqada Qaadiriyada, Sheekh Maxamed Xuseen iyo cuqaal fara badan ooy ka mid yihiin Caaqil Cali Aadan, Caaqil Jaamac Madar, Caaqil Ibraahim Warsame, Caaqil Xirsi Xuseen, Caaqil Xaaji Cabdullahi Jaamac, iyo Caaqil Cali Guuleed. Ergadaa ka koobnayd maashaa'ikhdii dariiqada iyo todobada Caaqil waxaa loo diray ergo ahaan Sayidka waxayna wadeen warqad Ingiriisku ku warsanayey Sayidka inuu ergadaas soo raaco. Ergadii waxay ka baxday Burco April 9, 1920kii iyadooy hogaaminayeen labadii nin ee warqada jawaabta ah Sayidka ka keentay, Xaaji Cismaan iyo Sheekh Cali.
Deelqaafku waa ba'an yahaye daacad ma u sheegay